कल्पना जानकारी को एक प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व हो, जुन सधैँ केहि चीज छ जो अस्तित्वमा छ, जुन वर्तमान वास्तविकतामा कुनै स्थान छैन। कल्पना, सबै भन्दा सचेत सपनाहरु - योजनाहरु - धेरै तथ्यहरु को नजिकै - सबै भन्दा धेरै रूप ले। कल्पनाको प्रक्रियामा, सोच, मेमोरी, विश्लेषण, र संसारको धारणाको तरिका पनि भाग लिन सकिन्छ।
मनोविज्ञानमा कल्पनाको पाँच आधारभूत रूपहरू छन्:
सपना भविष्यमा एक परिवर्तनको दर्शन हो जुन सटीक कार्यान्वयन मिति छैन;
कल्पना एक संशोधित रूप मा वास्तविकता को एक प्रतिबिम्ब हो;
हजुरआमाको एक बाह्य उत्तेजना बिना हाम्रो छवि अनुभवी छ।
सपनाहरू - एक असामान्य र अयोग्य भविष्यको प्रतिनिधित्व;
सपनाहरु - इच्छाहरु को बेहोश दृश्य।
कल्पना को यी रूपहरु को अतिरिक्त, एक अन्य दुर्लभ उल्लेख प्रजातिहरु - एक विचार प्रयोग।
यसको मुख्य विशेषता एक विचार प्रक्रिया हो, जसको समयमा एक व्यक्तिले भविष्यमा वास्तविकताको प्रतिबिम्ब प्रतिनिधित्व गर्दछ। उदाहरणका लागि, यो प्रकारको क्रियाकलाप कार्ल मार्क्सद्वारा प्रयोग भएको थियो जब उनले भने कि यो साम्यवाद मात्र विश्वको सबै देशहरूमा स्थापित हुँदा मात्र व्यवस्थित छ।
सपना, कल्पना को रूप को रूप मा व्यक्त गरिन्छ, एक वास्तविक संभावना को समय सीमा छैन। वास्तविकताको लागि सपनाबाट, हामी केवल इच्छा, दृढता, कार्य, उद्देश्यपूर्ण र आत्म-धार्मिकताको उपस्थितिबाट अलग हुन्छौं।
कल्पनाले यसको छविहरू तीन तरिकामा उत्पन्न गर्दछ:
Agglutination कल्पना को एक रूप हो जसमा छविहरु जो वास्तव मा पूरा नहीं हुन्छन् संयुक्त। उदाहरणको लागि, एग्ग्लुटन एक मर्मिडियमको छवि हो, जसमा महिला (अनुहार र ट्रंक), माछा (पूर) र अल्गा (कपाल) संयुक्त छन्। यो विधि हाम्रो रचनामा दुवै रचनात्मकता र अनौठो रूपमा प्रयोग गरिन्छ।
एक्सेन्ट - छविमा छुट्टै केहि कुरालाई जोड दिनुहोस्।
टाइप - एक दिइएको युगको लागि सामान्यको एक छविमा संयोजन / मानिसहरूको क्यारेक्टर लक्षणहरू।
तपाईँका भावनाहरू कसरी बुझ्नुहुन्छ?
सम्बन्धमा विश्वास गर्नुहोस्
मनोविज्ञान मा अंतर्दृष्टि तत्काल निर्णय को शक्ति को रूप मा
जोडेहरु को डर - किन केहि मान्छे जोडे को डर ले रहे हो?
उपयोगी डर के हो?
लत - यो के छ र यसको किसिमको अवस्थित छ?
Sociopath - यो के हो, सामाजिक फोबिया बाट फरक छ?
मनोविज्ञानमा कालो रंग
व्यक्तित्वको मनोवैज्ञानिक प्रकार
बच्चाहरु मा जन्मदिन
एनिमियाको लागि पोषण
चर्चमा कम्युनिष्ट - यो के हो र यो कसरी जान्छ?
एस्टटन कुचेर र मिलिया कुनिस अभिनेत्रीको तेस्रो गर्भावस्था बारे अफवाह पछि सार्वजनिक भए
कपास ऊन भेडाबाट शिल्प
फैशनेबल शर्ट्स - शर्ट्स संग सबै भन्दा स्टाइलिश तस्वीरहरुको चयन
खमीर आटाबाट स्याउ संग केक
केराको स्तनपान हुन सक्छ?
पूर्व दाबी मेलानी ब्राउन कोर्ट मा गायक को बिरुद्ध एक मुकदमा दायर गरे
कसरी बियो जिगर जिउने?
नरवा टाउन हल
कम्प्यूटर टमोग्राफी वा एमआरआई - कुन राम्रो छ?
बगैचा कसरी व्यवहार गर्ने?
विवाहित पुरुष मा भाग्य